Ciidamada ammaanka Nugaal oo gacanta ku dhigay gadiid siday lacag faalso ah (Dhegeyso) – Radio Daljir
Ciidamada ammaanka Nugaal oo gacanta ku dhigay gadiid siday lacag faalso ah (Dhegeyso)
Agoosto 22, 2013 7:29 b 0
Garoowe, August 22, 2013 – Ciidamada gobolka Nugaal ee Puntland, ayaa saacadihii tegey gacanta ku dhigay lacago been abuur ah oo la sheegay in laga keenay dhanka gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya, halkaas oo xiisada lacagtay ay waayadan ka jirtay.
Lacagtaan ayaa inteeda badan lagu qabtay Kantaroolka Garoowe iyo kan degmada Buurtinle ee isla gobolka Nugaal, waxaana siday gaadiidka waa weyn ee xamuulka ka keena Koonfur.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi xirsi Cali Qarjab shir jaraa?id qabtay, wuxuu ku sheegay in lacagtaasi ay ahayd mid been abuur ah oo la doonayey in la geeyo magaalada Bosaso, kadibna lagu faafiyo gobollada iyo degmooyinka.
Maamulka gobolka waxay degniin u jeediyeen gaadiidlayda, Mudane Qarjab oo kulankaas ka hadlay wuxuu ku dhawaaqay in ay talaabo ka qaadi doonaan ?dadka falalka noocaas ah ku dhaqaaqa.
Dhegeyso shir jaraa?id oo uu qabtay Cabdi Xirsi cali (Qarjab)
Meleteriga Kenya iyo ciidamo ka tirsan Al-shabaab oo ku dagaalamay xuduuda Kenya iyo Soomaaliya
Qaar ka mid ah qoddobada wada-hadallada federaalka iyo Jubbaland oo la isku mari waayey (Dhegeyso)